डन्डिफोर हटाउन अपनाउनुहोस् यी उपाय – Fewa Times
डन्डिफोर हटाउन अपनाउनुहोस् यी उपाय
प्रकाशित मिति: June 1, 2018 9:16 pm
डन्डिफोरले अति दुःख दियो भने छालाविज्ञलाई देखाउनुपर्छ । नयाँ पत्रिकाबाट
साबधान ! पायल्स रोगिले भुलेर पनि नखानुहोस् यी खानेकुराहरु
बोक्रामा कालो दाग भएको केरा खानेगर्नु भएको छ ? यस्ता ठुला रोगबाट बचाउँछ
जाडोमा अदुवा चिया खानुका फाइदै फाइदा
के तपाईको अनुहारभरि चाँया,पोतो,डन्डिफोर आएर हैरान हुनुहुन्छ ? घरमै बसी सजिल्यैसँग यसरी हटाउनुहोस् (विधिसहित)